. * . * . ကွယျတစငျး . * . * .: မျောက်ချောကုန်း၊ ကွင်းကလေး နှင့် ပန်းညိုကွင်း ပရဟိတ ကျောင်းများမှ ကလေးများအတွက် ဘုရားဖူး ဗဟုသုတခရီးတို အစီစဉ်
ရေးသားသူ မိုးခါး at 10/27/2012 12:20:00 PM
အကြောင်းအရာခွဲ contribution, ကုသိုလ်အဖွဲ့, ကြယ်ငါးကောက်သူများအဖွဲ့, မျှဝေခြင်း
ဖတ်ရတာ တကယ့်ကိုကြည်နူးဝမ်းသာစရာပါပဲ ညီမရေ။ ဝေမျှပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။း)
November 06, 2012 8:10 PM
မျောက်ချောကုန်း၊ ကွင်းကလေး နှင့် ပန်းညိုကွင်း ပရဟိ...